Wararka - Fujian Ubaxa iyo Dhoofinta Dhirta ayaa sare u kacay sanadka 2020
Waaxda Dhirta Fujian waxay shaaca ka qaaday in dhoofinta ubaxyada iyo dhirta ay gaartay US $ 164.833 milyan sanadka 2020, koror ka yimid 9.9% marka loo eego 2019. Waxay si guul leh "ugu rogtay xiisadaha fursado" waxayna ku gaareen koboc joogto ah dhibaatada.
Qofka mas'uulka ka ah Waaxda Dhirta Fujian wuxuu sheegay in qeybtii hore ee sanadka 2020, ee ay saameysay Cudurka 'COVID-19' ee gudaha iyo dibeddaba, xaaladda ganacsiga caalamiga ah ee ubaxa iyo dhirta ay noqotay mid aad u cakiran oo daran. Ubaxa iyo dhirta la dhoofiyo, kuwaas oo si isdaba joog ah u koraya, si xun ayey u saameeyeen. Waxaa jira dib u dhac dhab ah oo tiro badan oo badeecooyin ah dhoofinta sida ginseng ficus, sansevieria, iyo xirfadlayaal laxiriira waxaa soo gaadhay khasaaro lixaad leh.
Qaado Magaalada Zhangzhou, halkaasoo ubaxa iyo dhirta la dhoofiyo sanad walba lagu xisaabtamo in kabadan 80% wadarta dhoofinta dhirta gobolka tusaale ahaan. Maarso illaa Meey ee sanadkii hore waxay ahayd xilliga ubaxyada iyo dhirta loo dhoofin jiray magaalada. Qiyaasta dhoofinta ayaa lagu qiyaasay in ka badan saddex meelood meel wadarta dhoofinta sanadlaha ah. Intii u dhaxeysay bilihii Maarso iyo Maajo 2020, dhoofinta ubaxa magaalada ayaa hoos u dhacday ku dhowaad 70% marka loo barbardhigo isla muddadaa sanadka 2019. Hakadka ku yimid duulimaadyadii caalamiga ahaa, rarkii iyo saadka kaleba, ubaxyadii iyo dhirtii dhoofinta ee Gobolka Fujian waxay lahaayeen amarro ku dhow USD. 23.73 milyan oo aan lagu fulin karin waqtigii loogu talagalay isla markaana ay soo wajahday khatar weyn oo sheegasho ah.
Xitaa haddii ay jiraan waxoogaa dhoofinta ah, waxay inta badan la kulmaan caqabado siyaasadeed oo kala duwan oo ku saabsan soo dejinta waddammada iyo gobollada, taasoo keenta khasaaro aan la saadaalin karin. Tusaale ahaan, Hindiya waxay u baahan tahay ubax iyo dhir laga soo dhoofiyo Shiinaha in la karantiilo muddo ku dhow nus bil ka hor inta aan la sii deynin markay yimaadaan ka dib; Isutagga Imaaraatka Carabtu wuxuu u baahan yahay ubax iyo dhir laga soo waariday Shiinaha in la karantiilo ka hor inta aysan u aadin xeebta si loo baaro, taas oo si weyn u dheereysa waqtiga gaadiidka oo si daran u saameeya heerka noolaanshaha dhirta.
Ilaa iyo Meey 2020, iyadoo la fulinayo guud ahaan siyaasadaha kala duwan ee ka hortagga iyo xakameynta cudurrada, horumarka bulshada iyo dhaqaalaha, ka hortagga iyo ka hortagga cudurrada faafa ee gudaha ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagay, shirkadaha dhirta ayaa si tartiib tartiib ah uga baxay saameynta cudurka, iyo ubax iyo dhir dhoofinta ayaa sidoo kale soo martay dariiqa saxda ah waxayna ku guuleysatay kororka isbeddelka waxayna ku dhufatay heerar sare cusub.
Sannadkii 2020, ubaxa iyo dhirta loo dhoofiyo Zhangzhou waxay gaareen US $ 90.63 milyan, koror ka badan 5.3% marka loo eego 2019. Wax soo saarka ugu badan ee dhoofinta sida ginseng ficus, sansevieria, pachira, anthurium, chrysanthemum, iwm ayaa gabaabsi ah, iyo dhir kala duwan oo caleenta ah iyo dhaqankooda unugyada ah ayaa sidoo kale "adag in laga helo hal weel."
Dhamaadka sanadka 2020, aaga ubaxa ee gobolka Fujian wuxuu gaaray 1.421 milyan mu, wadarta waxsoosaarka waxsoosaarka dhamaan silsiladaha warshadaha wuxuu ahaa 106.25 bilyan yuan, qiimaha dhoofinta wuxuu ahaa 164.833 milyan oo doolarka Mareykanka ah, koror ah 2.7%, 19.5 % iyo 9.9% sanadba sanadka ka dambeeya.
Iyada oo ah goob wax soo saar muhiim u ah dhoofinta dhirta, ubaxa Fujian iyo dhirta la dhoofiyo ayaa ka sarreysay Yunnan markii ugu horreysay sanadka 2019, oo markii ugu horreysay lagu qiimeeyay Shiinaha. Kuwaas waxaa ka mid ah, dhoofinta dhirta dheriga ah ayaa ah tii ugu horreysay ee dalka muddo 9 sano ah oo xiriir ah. Sanadka 2020, qiimaha waxsoosaarka dhammaan ubaxa iyo silsiladda warshad abuurka waxay ka badnaan doontaa 1,000. 100 milyan yuan.
Waqtiga boostada: Mar-19-2021